Habibiana nataon-dRajoelina tamin’ny taona 2009 Raiki-tapisaka amin’ny ankizy sy tanora niaina izany
Vinan-dRajoelina Ireo manan-katao no tena hahazo tombony ?
Ny hamisavisana ny ratsy hiavian’ny soa, hoy ny fomba fiteny, ka enga tokoa anie tsy ho arakaraka ny ahiahin’ny olona ny hafitsoky ny fitondrana Rajoelina. Maro ireo velirano nambara fa hotanterahina, ary tsy misy ratsy ireny.
Fitantanana asam-panjakana Ho sarotsarotra ny fitsinjarana ny teti-bola iasana
Hiisa 22 ireo minisitra handrafitra ny governemanta hotarihin`ny praiminisitra vaovao ho avy eo fa tsy ho 30 mahery. Tombanana fa mety ho fitsitsiana izao, araka ny nambaran`ny filoham-pirenena vaovao nandritra ny fampielezan-keviny.
Hary Razafindrazaka « Enga anie ka hahay hamondrona ny Malagasy ny Filoha vaovao »
Ny atao hoe tsy azo hivalozana dia midika hoe tsy maintsy eken’ny rehetra, hoy ny mpanao politika, Hary Razafindrazaka.
Mety ho fidiran’ny TIM anaty governemanta Adihevitra tsy hifankahitana
Ny sabotsy 19 janoary aorian’ny fianianan’ny filoha nambaran’ny HCC fa voafidy dia hisy ny filankevitry ny minisitra hotarihiny, ary hametra-pialana ny governemanta Ntsay Christian aorian’izay, raha ny vaovao mivoaka.
Revolisionina namotika taty Afrika Manomboka tonga saina ireo firenena sasany
Nifanesy ireo karazana Revolisionina taty Afrika tany amin’ny 10 taona lasa na latsaka kely tany ho any.
Emmanuel Macron Hihaona amin-dRajoelina any Paris
Herinandro taty aorian’ny fanambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) fa voafidy ho filoham-pirenena Malagasy i Andry Rajoelina dia nandefa taratasy fiarahabana azy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron.
Omaly alakamisy 15 novambra no nampahafantarina tetsy Ampasanimalo ny fisian’ny hetsika fampirantiana anehoan’ireo fikambanana maro miahy ny ankizy marefo hotanterahina ny 20 sy 21 Novambra ho avy izao.
Marobe ny zon’ny ankizy tsy voahaja eto Madagasikara ka mahatonga azy ireo tsy manana ny toerana mihitsy eo anivon’ny fiarahamonina ary antony hanaovana ny hetsika. Maro be ny ankizy lasibatra amin’ny tsy fahafahana maneho hevitra sy tratran’ ny fanararaotana ara-nofo amin’izao fotoana izao. Nanambara ny teo anivon’ny vovonan’ny fiarahamonim-pirenena ho fiarovana ny ankizy (PFSCE) fa niaina horohoro tanteraka ny ankizy sy ny tanora tamin’ny fotoana fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009. Ireo ankizy teraka sy niaina tamin’izany dia saika simba fitondran-tena sy maherihery setra ary be famaliana daholo ny ankamaroany. Tsy omena tsiny fa nandalo fiainana korontana sy horohoro ary didin’ny be sandry izy ireo tamin’izany ka mahatonga ny toetrany be gafigafy sy tia ady. Tamin’ireny fotoana ireny aza moa dia nampanambadiana mbola kely ny ankizivavy kely tany ambanivohitra, eny fa na dia tsy ampy taona aza, noho ny fahasahiranana sy ny fahantran’ny ray aman-dreny nateraky ny fanapotehana orinasa Malagasy maro. Ahiana hatrany ny fahapotehan’ny taranaka Malagasy raha ireo olona tia korontana mpanongam-panjakana namela takaitra ratsy ireo no tafaverina eto amin’ny firenena